BBC Burmese - အစီအစဉ်များ - မိုဘီဂျီနို နဲ့ ဂျပ်စတင် ဘီဘာ
နောက်ဆုံး ရေးသားချိန် 19 စက်တင်ဘာလ 2010 - 13:11 GMT
ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ ရှင်သန်ရွေ့လျားနေတဲ့ မျိုးဆက် Mobile Generation အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မိုဘီဂျီနိုကဏ္ဍကနေ အစီအစဉ်တွေကို အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနဲ့ အင်္ဂါနေ့ညတိုင်း ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။
ဒီတစ်ပတ်အစဉ်မှာတော့ . . .
Justin Bieber လူသစ်တန်းအဆိုရှင်ဆု ရ
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ကလေးဆန်ဆန် ခပ်မိုက်မိုက် ခပ်ချောချော ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကနေဒါက ပေါ့ပ်အဆိုတော်လေး Justin Bieber အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က အင်တာနက်မှာ သူ့သီချင်း တွေ စတင်ပြီးတဲ့နောက် လူကြိုက်များ လာလို့ အမေရိကားက အဆိုတော်နဲ့ ထုတ်လုပ်သူ Usher က သူ့ရဲ့အလားအလာကို မျက်စိတွေ့ပြီး စင်တော် ကောက်လိုက်ပါတယ်။
မကြာခင်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ MTV ဂီတရုပ်မြင် သံကြားလိုင်းကနေ ချီးမြှင့်တဲ့ MTV Video Music Awards မှာလည်း သူဟာ Baby ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ အကောင်းဆုံး လူသစ်တန်း အဆိုရှင်ဆု ရခဲ့ပါတယ်။
MTV Video Music Awards ပုံရိပ်များ
ဒီနှစ်ကတော့ Lady Gaga ရဲ့ နှစ်ပါပဲ။ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ Lady Gaga MTV ဆု ၈ ဆုရခဲ့။
ဖျော်ဖြေရေး စင်မြင့်ကို ဂျပ်စတင် ဘီဘာ အလာ သူ့ကိုအားပေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေက တစစီဖြစ်သွားမလားထင်ရအောင် ပတ်ပတ်လည်ကနေ လှမ်းဆွဲ။
ဂျပ်စတင် ဘီဘာနဲ့ သူ့ရဲ့ နည်းပြနဲ့ ထုတ်လုပ်သူ Usher. ဂျပ်စတင်ဘီဘာက MTV မှာ လူသစ်တန်းအဆိုတော်ဆု ရ။
Eminem နဲ့ Rihanna ဖျော်ဖြေစဉ်။ Eminem ရဲ့ Not Afraid သီချင်းလည်း ဆုရ။
အဆိုတော် Katy Perry က ပဏာမစကာတင်စာရင်းမှာ ပါပေမယ့် ဆုတော့ မရခဲ့။
Kings and Queens အဖွဲ့ရဲ့ 30 Seconds to Mars ဗီဒီယိုလည်း ဆုရ။
ရက်ပ် အဆိုတော် Usher ဖျော်ဖြေစဉ်
ဒီနှစ်ဆန်းက ထုတ်ခဲ့တဲ့ Baby သီချင်းက Justin Bieber ကို ကမ္ဘာ့ပရိတ်သတ်တွေ သိသွားစေ တဲ့ သီချင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရက်ပ်အဆိုတော် Ludacris နဲ့ တွဲဖက်ဆိုထားတဲ့သီချင်းပါ။
ဒီ Baby သီချင်းကို အင်တာနက်က Youtube မှာ သီချင်းဗီဒီယိုစတင်တဲ့ ဒီနှစ်ဆန်းကစလို့ အခုချိန်ထိ ကြည်တဲ့အရေ အတွက်ပေါင်း သန်း ၃၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ပျမ်းမျှ တစ်ရက်ကို တစ်သန်းခွဲ ရလောက် ကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုက ကြောက်ခန်းလိလိပါ။ Facebook မှာလည်း သူ့ရဲ့ပရိသတ် ၁၁ သန်းခွဲတောင် ရှိပါတယ်။
Justin Bieber ကို မြန်မာ လူငယ်တွေကလည်း ကြိုက်ကြတယ်လို့ မြန်မာဆယ်ကျော်သက် တွေဖြစ်တဲ့ လန်ဒန်က မလဲ့နဲ့ ရန်ကုန်က Underground အဆိုတော် Tayza Mc က မိုဘီဂျီနို အစီအစဉ်ကို ပြောပါတယ်။
မိုဘီဂျီနိုကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါဝင်ပြောပြ ဆွေးနွေးချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝေဖန်အကြံပြု လိုရင်ဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။ စာတိုက်သတ္တာ ာအမှတ် ၉၉၇ ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့ကို စာရေးပို့နိုင်သလို အီးမေးလ်းနဲ့ ဆိုရင်တော့ burmese@bbc.co.uk ဆီကို ပေးပို့နိုင်ကြ ပါတယ်။
မိုဘီဂျီနို နဲ့ ပေါက်ကွဲခြင်းကဗျာ
မိုဘီဂျီနို နဲ့ GW
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
သူ့ရဲ့ ဂီတ၊ ဖက်ရှင်နဲ့ အောင်မြင်မှု
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ အဖေများနေ့
အဖေ့ကို ဘယ်လို ကျေးဇူးဆပ်မလဲ
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားဖွင့်ပွဲ
စာသင်ရင်း model ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစား
မိုဘီဂျီနို နဲ့ ကမ္ဘာ့ဂီတဆု
မိုဘီဂျီနို နဲ့ ရုပ်သံကျောင်းသား
မိုဘီဂျီနို နဲ့ မြေကမ္ဘာနေ့
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ လန်ဒန်က ဆယ်ကျော်သက်
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ မွန်အဆိုတော်
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ ၂၀၁၀ ဂရမ်မီဆုရသီချင်းများ